Marwo Amina Waris Oo Si Farshaxan Nimo Leh Uga Hadashay Eedo Uga Yimid Xisbiyada Mucaaridka | CeelSheekh News
Marwo Amina Waris Oo Si Farshaxan Nimo Leh Uga Hadashay Eedo Uga Yimid Xisbiyada Mucaaridka
“Anigu qof gaajoonaysa oo wax boobaysa ma ihi, qoyskayaguna waligiiba wuu iska ladnaa”
“Berri markaanu madaxtooyada ka tagno Aamina Waris cid caayaysa arki maysid”
“Haddii la yidhaahdo Axmed miyaad la talisaa? Haa waan la taliyaa, haseyeeshee xumaan kulama taliyo”
“Aniga shacabku imay dooran ee Axmed (Madaxweynaha) ayay doorteen runtii inay dadka qaarkii i caayaan waa khalad”
“Siilaanyo nin ka daacadsan, ka muwaadinsan oo musuqmaasuq ka necebi ma jiro”
Akhri: Jawaabo Ay Ka Bixisay Su’aallo Xamaasad Huwan Oo Ku Saabsan Eedaha Loo Jeediyo ee la Xidhiidha Musuq iyo faro-gelinta Dawladda
Hargeysa(Ceelsheekh)- Marwadda Kowaad ee Jamhuuriyadda Somaliland, Marwo Aamina Sh. Maxamed Jirde, ayaa iska baraxday eedaymaha loo jeediyo ee la xidhiidha musuqmaasuq iyo inay farogeliso maamulka dawladda.
Marwo Aamina Waris waxay sidaas ku sheegtay waraysi dheer oo xiiso badan oo ay kaga hadashay qodobbo badan oo ku wajahan siyaasadda, arrimaha bulshada, doorashada madaxtooyada ee waddanka ka qabsoomaysa dabayaaqada sannadkan iyo waxay qaban doonto marka odaygeedu wareejiyo talada dalka.
La soco qeybo kale oo kamid ah Waraysigan oo ay Marwadu Siisay Wargeyska Afka Xukuumadda ku hadla ee DAWAN, Waraysigaas oo ay kaga hadashay arrimo ay kamid yihiin sidii ay u badhitaari jirtay madaxweyne Siilaanyo xiliyadii halgankii dib u xoraynta, xusuusteeda go’aamo adag oo madaxweyne Siilaanyo qaatay.
Waxa kaloo ay waraysigan qaybihiisa dambe ay kaga hadli doontaa shaqooyinkii ay dibada ka soo qabatay, doorashada madaxtooyada ee qorshaysan 13-ka November ee sannadkan, shaqadii ay ka heshay Hay’adda Care International ee xukuumadii Rayaale ka hor istaagtay, haweenka Somaliland iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo shaqada ay qaban doonto marka madaxweyne Siilaanyo xilka madaxtinimo wareejiyo.